Tsy Hadinon’Andriamanitra ny Zanany
Tsaroan’Andriamanitra ny Zanany
NITOMANY i Jesosy rehefa maty i Lazarosy namany. Nalahelo ve i Jehovah, araka ny hevitrao, rehefa nijaly sy maty i Jesosy?... Milaza ny Baiboly fa ‘nalahelo’ Andriamanitra ary “nampalahelo” azy mihitsy ny zava-nitranga.—Salamo 78:40, 41; Jaona 11:35.
Azonao sary an-tsaina ve ny alahelon’i Jehovah rehefa nijery ny Zanany malalany maty izy?... Fantatr’i Jesosy fa tsy hanadino azy Andriamanitra, ka izao no teniny farany, talohan’ny hahafatesany: ‘Raiko ô, eo an-tananao no atolotro ny aiko.’—Lioka 23:46.
Fantatr’i Jesosy fa hatsangana izy, ary tsy havela ho any amin’ny “fiainan-tsi-hita”, na fasana. Rehefa natsangana i Jesosy, dia nilaza izay voasoratra momba Azy ny apostoly Petera. Hoy izy: “Tsy nafoy ho any amin’ny fiainan-tsi-hita Izy, ary ny nofony tsy tratry ny lo.” (Asan’ny Apostoly 2:31; Salamo 16:10) Tsy navela ho simba sy ho maimbo tao am-pasana ny fatin’i Jesosy.
Efa nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy, tamin’izy tetỳ an-tany, fa tsy ho faty ela be izy. Nohazavainy tamin’izy ireo fa ‘hovonoina izy, ary hatsangana amin’ny andro fahatelo.’ (Lioka 9:22) Tsy tokony ho gaga mihitsy àry ireo mpianatra rehefa natsangana tamin’ny maty i Jesosy. Gaga ve anefa izy ireo?... Andeha hojerentsika.
Ny zoma tamin’ny telo ora tolakandro teo ho eo no maty teo amin’ny hazo fijaliana ilay Mpampianatra Lehibe. Nino an’i Jesosy koa i Josefa, anisan’ny mpitsara nanankarena tao amin’ny Fitsarana Avo Jiosy, na dia tsy nampahafantatra izany aza. Nankany amin’i Pilato, governora romanina, izy, rehefa reny fa maty i Jesosy. Nangataka hampidina ny faty avy teo amin’ny hazo izy, mba halevina. Nentiny tany amin’ny zaridaina iray nisy fasana àry ny fatin’i Jesosy.
Nasiana vato lehibe teo amin’ilay fasana rehefa voalevina ny faty. Nihidy izany ilay fasana. Alahady ny andro fahatelo tamin’izay. Mbola tsy niposaka ny masoandro ka mbola maizina ny andro. Nisy lehilahy niambina ny fasana teo. Ny lohan’ny mpisorona no naniraka azy ireo hanao izany. Inona ny antony, raha fantatrao?...
Efa ren’ny mpisorona koa fa niteny i Jesosy hoe hatsangana amin’ny maty izy. Nanisy mpiambina àry izy ireo. Amin’izay, hono, ny mpianatra dia tsy ho afaka hangalatra ny faty, ka hilaza fa nitsangana i Jesosy. Tampoka teo dia nihovotrovotra ny tany. Nisy tselatra nazava tao anaty haizina. Anjelin’i Jehovah ilay izy! Natahotra be ireo miaramila ka tsy afa-nihetsika. Nankeo am-pasana ilay anjely ary nanakodia an’ilay vato. Tsy tao intsony ilay faty!
Nahoana no foana ny fasana? Inona no nitranga?
Marina tokoa izay nolazain’ny apostoly Petera tatỳ aoriana. Hoy mantsy izy: “Izany Jesosy izany dia efa natsangan’Andriamanitra.” (Asan’ny Apostoly 2:32) Novelomin’Andriamanitra i Jesosy, ary nomeny vatana tahaka ilay nananany talohan’ny nahatongavany tetỳ an-tany. Natsangana izy, ary nomena vatana ara-panahy tahaka ny an’ny anjely. (1 Petera 3:18) Mba hahitan’ny olona azy àry, dia tsy maintsy manamboatra vatana hita maso i Jesosy. Nanao izany ve izy?... Andeha hojerentsika.
Efa niposaka izao ny masoandro. Efa lasa ny miaramila. Teny an-dalana hankany am-pasana i Maria Magdalena sy ny vehivavy hafa mpianatr’i Jesosy. Niresaka izy ireo hoe: ‘Iza no hanakodia ny vato mavesatra ho antsika?’ (Marka 16:3) Efa nisy nanakodia anefa ilay vato, rehefa tonga teo am-pasana izy ireo, ary tsy tao intsony ny fatin’i Jesosy! Tonga dia nihazakazaka nitady ny apostoly i Maria Magdalena.
Nijanona teo kosa ireo vehivavy hafa. Nanontany tena izy ireo hoe: ‘Nankaiza àry ny fatin’i Jesosy?’ Tampoka teo dia nisy roa lahy nanao akanjo namirapiratra niseho taminy. Anjely izy ireo! Hoy izy ireo: ‘Nahoana no mitady an’i Jesosy eto ianareo? Nitsangana tamin’ny maty izy. Mandehana haingana ka ilazao ny mpianany.’ Azonao sary an-tsaina fa lasa nihazakazaka mafy tokoa ireo vehivavy ireo! Nisy lehilahy nifanena taminy teny an-dalana. Iza io raha fantatrao?...
Tsy iza fa i Jesosy! Niteny koa izy hoe: ‘Mandehana ka ilazao ny mpianatro.’ Maika erỳ ireo vehivavy. ‘Velona i Jesosy ary hitanay izy!’, hoy izy ireo rehefa nahita ny mpianatra. Efa noresahin’i Maria tamin’i Petera sy Jaona fa foana ilay fasana. Tonga tany izy ireo, araka ny hitanao eto amin’ny sary. Nojereny ny lamba namonosana an’i Jesosy, nefa nisalasala be ihany izy ireo. Te hino izy ireo hoe velona indray i Jesosy, nefa toa tsara loatra ilay izy ka tsy nampino.
Inona no nety ho tao an-tsain’i Petera sy Jaona?
Taoriana kelin’izay, io alahady io ihany, dia niseho tamin’ny mpianatra roa lahy i Jesosy. Teny an-dalana hankany Emaosy izy ireo. Niaraka tamin’izy ireo i Jesosy sady niresaka taminy nefa tsy fantany, satria vatana hafa no nisehoany. Rehefa niara-nisakafo taminy sy nivavaka i Jesosy vao fantany. Tena nientam-po ireo mpianatra ka nandeha kilaometatra maro, niverina haingana tany Jerosalema! Fotoana fohy taorian’izay angamba i Jesosy no niseho tamin’i Petera, mba hanaporofoana taminy fa velona izy.
Taorian’izay, ny takarivan’io alahady io, dia nisy mpianatra maro tafavory tao amin’ny efitra iray. Nihidy ny varavarana. Tampoka teo, dia niaraka tamin’izy ireo tao amin’ilay efitra i Jesosy! Fantatr’izy ireo tamin’izay fa tena velona indray ilay Mpampianatra Lehibe. Alao sary an-tsaina ange ny hafalian’izy ireo e!—Matio 28:1-15; Lioka 24:1-49; Jaona 19:38–20:21.
Nitafy vatana hita maso isan-karazany i Jesosy, nandritra ny 40 andro, mba hanaporofoana tamin’ny mpianany fa velona izy. Nandao ny tany izy taorian’izay, ary niverina tany amin’ny Rainy any an-danitra. (Asan’ny Apostoly 1:9-11) Tsy ela dia nanomboka nilaza tamin’ny olona rehetra ny mpianatra, fa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty i Jesosy. Nodarohan’ny mpisorona izy ireo, ary nasainy novonoina ny sasany, nefa nitory foana izy ireo. Fantany mantsy fa raha maty izy, dia hahatsiaro azy Andriamanitra, tahaka ny nahatsiarovany ny Zanany.
Inona no ao an-tsain’ny maro amin’ny fitsingerenan’ny andro nitsanganan’i Jesosy? Inona kosa no ao an-tsainao?
Tena tsy mitovy amin’ireny mpianatr’i Jesosy voalohany ireny ny ankamaroan’ny olona ankehitriny! Ny bitro sy ny atody milokon’ny Paka no ao an-tsain’izy ireny, amin’ny fitsingerenan’ny andro nitsanganan’i Jesosy. Tsy miresaka bitro sy atodin’ny Paka mihitsy anefa ny Baiboly. Ny fanompoana an’Andriamanitra kosa no resahiny.
Afaka manahaka ny mpianatr’i Jesosy isika, ka milaza amin’ny olona fa zava-dehibe no nataon’Andriamanitra rehefa nanangana an’io Zanany io tamin’ny maty. Tsy tokony hatahotra mihitsy isika, na dia misy mandrahona hamono antsika aza. Raha sanatria ka maty aza isika, dia hahatsiaro antsika i Jehovah ka hanangana antsika, tahaka ny nataony tamin’i Jesosy.
Faly isika mahafantatra fa tsaroan’Andriamanitra ireo manompo azy, ary hatsangany amin’ny maty, sa tsy izany?... Tokony haniry hahafantatra ny fomba azontsika ampifaliana an’Andriamanitra àry isika. Fantatrao ve fa tena afaka mampifaly azy isika?... Izany no horesahintsika manaraka.
Ho mafy ny fanantenantsika, ary hatanjaka ny finoantsika, raha mino isika fa natsangana tamin’ny maty i Jesosy. Vakio ny Asan’ny Apostoly 2:22-36; 4:18-20; 1 Korintianina 15:3-8, 20-23.
Hizara Hizara Tsaroan’Andriamanitra ny Zanany